Mahajanga: Mafana ny toe-draharaha politika
vendredi, 13 avril 2018 14:36
Manatanteraka ny fivoriana tsy ara-potoana ato amin'ny Lapan'ny Tanàna ireo mpanolotsaina monisipaly, natokana hamalian'ny Ben'ny Tanàna Andriatomanga Mokhtar Salim ireo fanontaniana fangataham-panazavan'ireo mpanolotsaina miisa 11 amin'ireo 19 mpikambana.
Voatery naato avokoa ny fampandehanan-draharaha rehetra eto anivon'ny biraon'ny kaominina noho ny hamaroan'ny vahoaka nibosesika hiditra, liana sy manohana ny Ben'ny Tanàna mihorakoraka sy tsy manaiky izany fikasana hanala ny Ben'ny Tanàna izany.
Voatery ambenan'ny mpitandro ny filaminana ary tsy azo idirana ato amin'ny Lapan'ny Tanàna hatramin'ny 10 ora maraina teo satria mbola teo ampandinihana ny valim-panontaniana nomen'ny Ben'ny Tanàna ireo mpanolotsaina no efa nibosesika niditra ireo vahoaka.
Mihenjan-droa ihany koa anefa ny tady eo amin'ny samy mpanolotsaina satria misy ireo ampahany tsy nanasonia ny fangataham-panazavana nomena ny Ben'ny Tanàna no tsy nampahafantarina akory ny votoatiny fa rehefa feno ny fetr'isa dia nalefa ny fangatahana.
Mbola anatin'ny adihevitra tanteraka ny roa tonta ary mifampihaino ao amin'ny efitrano fivoriana.
Anisan'ny teboka nangatahana fanazavana amin'ny Ben'ny Tanàna sy ny mpiara-miasa aminy moa mahakasika ny fampiasana Mobile Banking na ny fandoavana ny hofan-tsena amin'ny alalan'ny MVola. Eo ihany koa ny fandraisana ny fanampiana izay tsy tokony ho nampandalovina tamin'izy ireo raha ny fanazavana, eo ohatra ny fiarabe fanangonana fako ho an'ny tanàna, ny fanamboarana ny zaridaina Ralaimongo sy ny maro hafa.
Ankoatra izay ny filazan'ireo mpanolotsaina fa nosoratan'ny Ben'ny Tanàna amin'ny anarany ny fiara izay natolotry ny firenena Tiorka, ny fanamboaran-dalana izay tamin'ny volan'ny kaominina madiodio no nanamboarana azy.
Andrasana ny fehin-kevitra tapaka amin'izao fivoriana tsy ara-potoana izao.